Warbixin muhiim ah — Bostads AB Mimer
Sababata oo ah cudurka hada jooga Coronaviruset oo faafaaya ayaan rabnaa in aanu kula socodsiino Arimahan soo quran.
Bilihii la soo dhaafay ayaa sida aad la socotaan aananu sameynin dhamaan noocyada shaqada ee guryaha laga qabto. Aad baad ugu mahadsantihiin fahamka iyo dulqaadka aad mudadan muujiseen. Hadda waxa aanu dib idiinku soo dhaweynaynaa inaad wixii shaqo la qabanaayo noogu soo sheegtaan sidii caadiga aheyd. Wixii shaqooyin guriga gudahiisa ah khuseeya ayaanu hadda leenahay nidaam/hab waxqabad oo muhiim ay tahay inaynu idinka iyo anaguba wada raacno si loo yareeyo faafitaanka cudurka:
Sidan ayey u dhaceysaa shaqada gurigaaga laga qabanayaa
Xayiraadaha deegaanka ee hadda Västmanland ka shaqeynaaya dartood ayaanu qaadeynaa tallaabooyinkan taxadirka ah ee soo socda marka shaqo gurigaaga laga qabanaayo:
Qofka kireystaha ahi waa inuu sidoo kale ka fikiro haddii arintaadu ay tahay in la xalliyo hadda ama haddii ay sugi karto. Waxa aanu dhimeynaa khatarta faafitaanka fayruska haddii aan iska deyno booqasho adiga gurigaaga lagu iman lahaa oo aan muhiim aheynhadda.
Shuruudda ku xiran inaanu gurigaaga shaqo ka qabano ayaa ah inaanu guriga qof joogin xilliga booqashada. Waxa aanu kula soo xiriiri doonaa booqashada ka hor si aad ugu ogaato marka aan imaan doono. Haddii aad leedahay ballan laguu qabtay oo aanad gurigaaga ka tagin/bixin marka aanu annagu ama qandaraaslahayagu imaaneyno ayaananu shaqo qaban karin. Halkaas ayaanu markaas ka tagi doonaa. Taasi waxa loo sameynayaa waa amaankaaga iyo kaayagaba.
Waqtiyada adeega oo in muddo ah wakhti ka dheer qaadanaaya.
Waqtiyadayada adeegga si aan ugu qabanno shaqo ayaa noqon doona wax intii caadiga aheyd ka dheer. Waxaanu kiisaska ugu maareyn doonaa sida ay ugu soo kala horeeyeen iyadoo waxyaalaha xumaada ee aan darruuriga aheyni ay qaadan karaan illaa saddex toddobaad si loogu hagaajiyo.
Fadlan ogeysiinta adeeggaaga (serviceanmälan) ka soo samee adigoo soo maraaya Mina sidor (boggeyga)
Marka aynu hadda dib ugu laabano adeegeena caadiga ah, ayay dhici kartaa in dad badani ay hal mar nala soo xiriiraan. Waxa taasi keeni kartaa inay xilliyada qaar uu safka khadka telefoonku aad u dheer yahay. Waxaanu qofku haystaa fursad uu marka hore uu ogeysiinta adeeggaaga ka sameeyo isagoo soo maraaya Mina sidor.
Shaqooyinka kale ee loo diyaariyey in gurigaaga laga qabto
Waanu qabanaa dalabka laga sameynaayo Plus- iyo tillvals, laakiin tani waxay shuruud u ah inaanad guriga joogin inta shaqada la qabanayo. Xilligan hadda la joogo, ayaa waqtiga sugitaanka ee shaqada Plus- iyo tillvals uu tahay mid wakhti waxoogaa ka yara dheer sidii caadiga ahayd ah.
Xarunta macaamiisha ee Mimer- sidan ayaad noola soo xiriireysaa
Lyadoo adiga kireyste ahaan iyo shaqaalaheyaga kale la idinka fikiraayo ayaanu hadda kaliya qaabileynaa ballamaha booqashooyinka ee xaruntayada macaamiisha hore looga qabsadey. Waxaad wali si fudud noogala soo xiriiri kartaa adigoo soo maraaya:
ka samee serviceanmälan kaaga adigoo soo maraaya Mina sidor
soo wac 021-39 70 00
Miyaad u baahan tahay inaad fure ka qaadato ama soo celiso?
Haddii aad furayaal soo celineyso ayaad taas ka sameyn kartaa sanduuqayaga waraaqaha ee ku yaala iridda Navet ee Gasverksgatan 7 laga soo galo banaankeeda
Haddii aad dooneysid inaad furayaal qaadatid, ayaad ballan nala qabsan doontaa adigoo soo maraaya Xarunta Macaamiisha. Kor ka fiiri macluumaadka xiriirka
Qaadashada iyo soo celinta furayaasha ayaa la sameyn karaa Isniinta – Khamiista saacadaha 10-17 iyo Jimcaha markay tahay 10-15.
Marka bilowga bisha la gaaro, ayaanu Xaruntayada Macaamiisha ee ku taal banaanka beerta Navet ee Gasverksgatan joognaa si aanu kaaga caawinno maareynta furayaasha ee guuritaankaaga la xiriira. Waxaanu halkan joognaa maalinta shaqada ee bil kasta ugu horeysa saacadaha u dhaxeeya 10.00 iyo 14.00.
Masuuliyadi waxay kaa saaran tahay in aad caawiso in uu yaraado inuu faafo cudurka coronaviruset
Hoosna waxaad ka heli kartaa dhamaan warbixinihii ay dawladdu bixisey.
Krisinformation.se: Hoos ka akhriso warbixint ay soo diyaarisay hayada xaaladha khatarta ah:
Folkhalsomyndigheten.se: Hoos ka akhriso warbixintii
Ka daawo filmka warbixintii hayda cudurada faafa ay soo diyaarisay
Senast uppdaterad: 18 november 2020 kl. 10:04